भ्रष्टाचार के मा भयो र कती भयो भन्ने गनेर साध्य नै छैन: काँग्रेस सभापती देउवा::Independent News Portal from Nepal.
नेपाली काँग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धी प्रकरण एक्लो व्यक्तिको संलग्नतामा सम्भव नभएको बताउनुभएको छ । आज लुम्बिनी पुगेका सभापती देउवाले निर्वमान संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरण चानचुने बिषय नभएकाले यसमा जोडिएका सबैमाथि निश्पक्ष छानबिन हुनु पर्ने बताउनुभएको हो।
सभापती देउवाले बास्कोटा काण्डमा अन्य उच्च व्यक्तिको पनि संलग्नता हुन सक्ने संकेत गर्दै निश्पक्ष छानबिन हुन पर्ने र काँग्रेसले पनि त्यसको खोजी गर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीका अति विश्वास पात्रले एक्लै त्यत्रा काण्ड गरे भनेर पत्याउने आधार नभएको देउवाको भनाइ थियो । ‘त्यत्रा त्यत्रा काण्ड एक्लै गरे भनेर पत्याउन सकिदैन । त्यसमा को को छन ? निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । सरकारले जवाफ दिनु पर्छ ’ । काँग्रेस यतीकै चुप लागेर बस्दैन । हामीले छोड्दैनौं’ सभापती देउवाले भन्नुभयो।
नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गा प्रसाद उपाध्यायको श्रद्धान्जली सभालाइ आज लुम्बिनीमा सम्बोधन गर्दै पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाइ पनि गर्न दिन्न भन्ने ओली सरकारले भ्रष्टाचारका काण्डै काण्ड गरेको आरोप पनिलगाउनुभयो। ‘भ्रष्टाचार के मा भयो र कती भयो भन्ने गनेर साध्य नै छैन । तीनै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी लुकाउन नीतिगत रुपमै सरकार लागी परेको छ’ देउवाले भन्नुभयो । नीतिगत निर्णयको नाममा सरकारले मनपरी ढंगले काम गरेको भन्दै देउवाले आफना गल्ती कमजोरी चोख्याउने र भ्रष्टाचारीलाइ उम्काउने काम ओली सरकारले गरीरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसको काँधमा ठुलो जिम्मेबारी रहेको भन्दै देउवाले ती जिम्मेवारी पुरा गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो ।‘हाम्रा अगाडी ठुल्ठुला काम छन । जिम्मेवारी छन । ती पुरा गर्न तपाइहरु सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ’ देउवाले भन्नुभयो । पहिलो नम्बरको पार्टी बनाउने जिम्मेबारी आफनो काँधमा रहेको उल्लेख गर्दै सभापती देउवाले काँग्रेसलाइ बलियो र एक नम्बरको पार्टी बनाएर मात्रै आफुले बिश्राम लिने पनि बताउनुभयो । स्वर्गीय नेता उपाध्यय प्रति श्रद्धान्जली व्यक्त ग गर्दै देउवाले एकजना कर्मठ र सच्चा नेता गुमाएको र स्वर्गीय नेता उपाध्यायको योगदानको उच्च मुल्याङ्कन गर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस संसदिय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले दुइ तिहाइको शक्ति प्रयोग गरेर सरकारले अनियमितता गरीरहेको बताउुभयो ।कम्युनिष्ट सरकारले भ्रष्टाचारका काण्डै काण्ड गरेर दिउसै रात पारीदिएको उनले बताउनुभयो । १४ खर्बको बजेटमा २ खर्ब सरकारका पुर्व प्रवक्ताले स्याटलाइ, फोरजी लगायतका खरीद प्रकरणमा खर्च गराइदिएको र ठुल ठुला भ्रष्टाचारका काण्डै काण्ड गरेको आरोप नेता खाँणले लगाउनुभयो ।
भ्रष्टाचार अनियमितता सगै सरकारले मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता,नागरिकको गोपनियताको हक,मौलीक अधिकारलाइ कमजोर पारेको, सेना तथा सुरक्षा निकयालाइ आफनो पार्टीको पेवा जस्तो बनाएको पनि बताउनुभयो । ‘जनताका मौलीक अधिकार खोसेर । सरकारी कर्मचारी र जनतालाइ अपहेलित गरेर सरकार बलियो हुदैन । बरु यसले देशलाइ कमजोर बनाउछ । लोकतन्त्र कमजोर धरापमा पर्छ’ नेता खाँणले भन्नुभयो । संघिय गणतन्त्र प्रति नेपालका कम्युनिष्टहरुको विश्वास नरहेको भन्दै उहाले काँग्रेस कमजोर भए लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने बताउनुभयो । कम्युनिष्ट सरकारको भ्रष्टाचारी खेल र मनपरीतन्त्रलाइ रोक्न काँग्रेस बलियो हुनुपर्ने र त्यसकालागि सबै जुटेर अगाडी बढनु पर्नै खाँचो औल्याउनुभयो।
नेता खाँणले प्रम ओलीले जन्मदिनमा नेपालको नक्सालाइ केक बनाएर धारीलो छुरा प्रहार गरेको र कपाकप खाएको भन्दै चर्को आलोचना गर्नुभयो । ‘त्यो दृष्यले हरेक नेपालीको मन रोएको छ । नेपालको नक्सा रुपी केक बनाएर प्रधानमन्त्रीले नै कपाकप खाँदा नेपाली जनताको मनमा छुरी रोपीएको छ’ नेता खाँणले भन्नुभयो। कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले जन्मदिनमा हेलीकप्टरबाट केक बोकेको, अनावश्यक रुपमा धेरैलाइ सरसामान बाँडेको भन्दै त्यसरी गरीएको फजुल खर्चले देशमा समृद्धि नआउने बताउनुभयो । कार्यक्रममा काँग्रेसका नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापती भरत शाह,नेताहरु दिपकुमार उपाध्याय,अब्दुल रज्जाक,फकरुद्धिन खाँन, बलिउल्लाह मुसलमान,रामकृष्ण खाँण,रमजान अलि लगायतले बोल्दै जनताले खुन पसीना बगाएर ल्याएको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकारकै मन्त्रीहरु संलग्न भएका भ्रष्टाचारका ठुला घटनाले जनतालाइ निरास बनाएको भन्दै निश्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाइ कारबाही गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति : सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६ , ९:०९ बजे
आगामी दुई साता चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ,कोरोनाविरुद्ध काम गर्नेलाई बिमा र भत्ता : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)
आन्तरिक विवादपछि नेकपामा सचिवालय वैठक डाक्न प्रवक्ताको माग
औषधि खरिद प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्ने कार्य माफी योग्य छैन :कांग्रेस